Dad mudaaharaadayay oo lagu dilay Venezuela – Star FM Kenya
April 13, 2017 starfmke 0 Comment
Labo qof oo mudaaharaaadayay ayaa lagu dilay dalka Vanezuela, iyadoo ay ka sii darayaan xiisadaha siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dalkaas ka jira.
Wiil 14 jir ah iyo qof kale oo mudaaharaadayay ayaa toogasho lagu dilay habeenimadii Talaadada iyaga oo ku sugan magaalada Barquisimeto.
Gudoomiyaha deegaankaas ayaa arrintan ku eedeeyay dad taageersan dawladda oo hubaysnaa, labadan arday waxaa la dilay intii uu socday mudaaharaadkii todobaadkii hore.
Madaxweyne nimada Nicolas Maduro ayay soo foodsaartay caddaadis isa soo taraya iyadoo ay waxyeelo ka soo gaartay dhaqaalihii dalkaas, dadka ka soo horjeedana ay ku eedaynayaan in uu abuurayo xukun kaligii talisnimo ah.
Dad caraysan ayaa ku mudaaharaaday Maduro oo ka soo baxay munaasabad ay lahaayeen milatariga oo ka dhacaysay gobolka Bolivar ee ku yaala koonfurta-bari ee dalkaas, arrintaas ayaa dhacday galinkii hore ee Talaadadii.
Mudaaharaadyadan cusub ee dawladda lagu diidan yahay ayaa billawday ka dib markii ay dawladdu go’aamisay Jimcihii in hogaamiyaha mucaaradka Henrique Capriles uusan hogaanka dalka u tartami karin muddo 15 sano ah.
← Maamul goboleedka Nairobi oo 27 bilyan oo shilin u adeegsanaya in ka dhiso goob qashinka laisugu geeyo
11 garsoorayaal oo uu gudiga JSC shaqada ka tiray
February 10, 2017 starfmke 0
Ururka macalimiinta ee KNUT oo walaac ka muujiyay miisaaniyada loo qoondeeyay waxbarashada
April 10, 2017 starfmke 0
Booliska oo xiray dad loo heysto in ay taleefonno qaali ah ka xadeen shirkii TICAD
September 5, 2016 starfmke 0